In waayeel lagu noqdo dalka Iswiidan | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Ku saabsan Iswiidhan / In waayeel lagu noqdo dalka Iswiidan
Mawduucan wuxuu ku saabsanyahay in lagu gaboobo gudaha Iswiidhan.
Waxaad akhrin doontaa wixii ku saabsan xuquuqaha iyo fursadaha ay dadka waayeelka ahi leeyihiin iyo nooca caawimaad ee jirta in la helo. Waxaad akhrin doontaa xitaa wixii ku saabsan takoorida ku salaysan da’da iyo waxa aad sameyn karto haddii laguu geysto taas.
Mawduucan wuxuu ku saabsanyahay xitaa hawl-gabka iyo sida dhaqaalahaaga ay raad ugu yeelato marka aad waayeel sii noqoto ee aanad shaqayn. Waxaad ka fikiri doontaa sida aad ugu noolaan karto nolol fiican oo firfircoon ka dib nolosha shaqada iyo sida aad u daryeeli karto caafimaadkaaga marka aad waayeel sii noqoto.
Waxaad akhrin doontaa xitaa waxa aad u baahantahay inaad ka fikirto marka qof qaraabo dhow ahi dhinto.